के सियुदाद डेल एस्टेमा किनमेल गर्न लायक छ? - पराग्वे - 1aviagem.com
Previous post: Desabafo – Brasília – Brasil
Next post: Ideologia de Esquerda vs Direita, porque é quase impossível definir de qual lado você está?
मान्छेहरू, हामी संगरोधमा भएका कारण, मैले केहि पुराना फोटोहरू समीक्षा गर्ने निर्णय गरें र ती मध्ये बीचमा मैले प्याराग्वेको पहिलो यात्रा भेट्टाएँ। र मैले सोचें: वाह, तिनीहरू प्याराग्वेको बारेमा थोरै कुरा गर्छन्, किन म यसको बारेमा अलिक कुरा गर्न सक्दिन? र परिणाम यहाँ छ।
पराग्वे दक्षिण अमेरिकामा छ र अर्जेन्टिना, ब्राजिल र बोलिभियाको सीमा छ। यो एक मात्र दक्षिण अमेरिकी देश हो जसको समुद्रमा कुनै बाटो छैन।
र हेर, उसले सागरमा एक सानो एक्जिट गर्न संघर्ष गर्यो। १ 1864 मा पराग्वेले एउटा युद्ध सुरू गर्‍यो जुन इतिहास सदाको लागि बदल्छ। र यसले ब्राजिल र अर्जेन्टिना बीच एक सम्भावित गठबन्धन पनि ल्याउँदछ! (र उरुग्वाइन्स पनि)। यो सम्पूर्ण कथा फ्रान्सिस्को सोलानो लोपेजले सुरु गरेको पराग्वे युद्धमा भयो।
छोटो, बोलाइएको र बाक्लो जुँगाको साथ!
सोलानो लोपेजको बारेमा थोरै कुरा गर्दै। उनी सेनाका कमाण्डर र पराग्वेका अध्यक्ष थिए।
त्यस समयको लागि उनीसँग धेरै महत्वाकांक्षी योजनाहरू थिए। म पराग्वे क्षेत्र विस्तार गर्न चाहान्छु, देशलाई समुद्रमा आउटलेट दिन र प्याराग्वेलाई ल्याटिन अमेरिकामा आर्थिक शक्ति बनाउने। ऊ थोरै चाहन्थ्यो। ब्राजिलियन क्षेत्रको भाग लिन (विशेष गरी आजको भाग माटो ग्रोसो डो सुल र पारानाको अर्को भाग बनेको भाग), सबै ब्राजिल एक धेरै ठूलो साम्राज्य भएपछि। अह, म पनि अर्जेन्टिनाको एउटा टुक्रा चाहान्छु, जुन त्यस समयमा एउटा राष्ट्रको रूपमा गठन गरिएको थियो। एट्लान्टिक महासागर पहुँच गर्न र कसरी त्यो गर्ने? उत्तम तरिकामा जुन सेनाले कसरी गर्ने जान्छ। मद्दत प्रस्तुत गर्दै। यस अवस्थामा, उरुग्वे। द्वन्द्वको समयमा, पराग्वेले भने कि अर्जेन्टिनाका युद्धहरूले यसको गतिविधिमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ र अर्जेन्टिना उरुग्वेसँग लियो र रियो दे ला प्लाटाको भूमिमा, जुन पराग्वेबाट बाहिर निस्केको एक मात्र बाटो सागरमा पुगेको थियो। त्यसैले सोलानो लोपेजले उरुग्वेवासीहरूलाई सैन्य सहयोग प्रस्ताव गरे। यसैले उनले नदीमा आफ्नो पहुँचलाई सामान्य बनाउने थियो र प्रक्रियामा केही ब्राजिलिया र अर्जेन्टिनी भूमि पनि प्राप्त गर्न सक्थे।
हुनसक्छ त्यहींबाट १ success s० को सफलता आयो।
"एडिलेड, मेरो पराग्वे बौने" - राजाको शत्रु
हितको युद्धमा त्यहाँ निर्दोष देशहरू छैनन्।
यो याद राख्नुहोस्: countries देशहरूको यस क्षेत्रमा रुचि थियो। संक्षिप्तमा, सबैजना आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्न चाहन्थे। ब्राजील, अर्जेन्टिना, उरुग्वे र पराग्वे। पराग्वे ब्राजिल भन्दा बढी हतियार र सैनिक प्रस्तावमा छिटो थिए ताकि उरुग्वेले अर्जेन्टिना बिरूद्धको युद्धबाट र भविष्यमा ब्राजिलको बिरूद्ध लड्न सक्ने थियो। सोलानो लोपेजको समस्या बिरामी नभएको र एकै पटकमा धेरै युद्ध मोर्चा ट्रिगर गर्दै थियो। कुन कुराले अर्जेन्टिना, ब्राजिल र उरुग्वेको बिच एक ट्रिपल गठबन्धन ल्यायो जुन एक सहयोगी मानिन्छ, तर पराग्वेको बिरूद्ध समाप्त भयो। त्यसो भए, तीनमा एक पाराग्वे बिरूद्ध लडाई समाप्त भयो।
ब्राजिलियनहरूले कथालाई सोलोनो लोपेज एक "रक्तपातिक पराग्वे एक तानाशाह" को दृष्टिकोणबाट बताउँछन्। र यो उसको महत्वाकांक्षा हो जसले देशलाई हरायो र क्षेत्रीय घाटामा पुर्‍यायो। तर सत्य यो हो कि यो कथा सत्य भन्दा पाराग्वेन प्रतिरोधको कारण अधिक हो। पराग्वे पक्षमा, सोलानो लोपेज एक राष्ट्रिय नायक थिए, यदि यो उनीहरूको नभएको भए, पराग्वेको मृत्यु हुने थियो र अर्जेन्टिना वा ब्राजिलको भूमिमा गाँसिएको थियो। र वास्तवमा उनी the देशहरू मध्ये एक मात्र थिए जससँग सैन्य शक्ति थियो, उनी आर्थिक शक्ति बन्न चाहन्थे, उसको रणनीति औंल्याइएको थियो। उरुग्वेवासीहरुकोलागि, .. तिनीहरू ब्राजिलको बिरूद्ध आन्तरिक र बाह्य नागरिक र वैचारिक युद्धबाट गुज्रिरहेका थिए। गाईवस्तुहरूको लागि झगडा। यो बाहिर उरुग्वे मा दासत्व पहिले नै समाप्त भएको थियो कि बाहिर, ब्राजिल मा अझै छैन। त्यसैले ब्राजिल गाईवस्तु उरुग्वेन भन्दा धेरै सस्तो थिए। थप रूपमा, त्यहाँ एक आन्तरिक गृहयुद्ध थियो। भाग प्याराग्वेको सहयोगको लागि पर्खिरहेको छ र अर्को भाग ब्राजिलको मद्दतको लागि पर्खिरहेको छ।
तथ्य यो हो कि महत्वाकांक्षाहरूको बाबजुद एउटा शक्तिशाली सेना हुनु र सम्पूर्ण देश हुनु (पहिले नै राष्ट्र हुनु र वैचारिक हिसाबले विभाजित नहुनु वा गणतन्त्रको गठन गर्नु) मा पनि विजय र क्षेत्रीय विस्तारको सट्टा रणनीतिले एउटा असामान्य ल्यायो। ब्राजिलियनहरू, अर्जेन्टिना र उरुग्वाइन्स बीचको गठबन्धन र पराग्वेको लागि कटु हार, जुन आजसम्म दक्षिण अमेरिकी शक्तिको रूपमा आफ्नो स्थितिमा फर्कन सकेको छैन।
सिउदाद डेल एस्टे
प्यारो, एक विशाल कथा पछि मात्र तपाईले बुझ्नको लागि किन प्याराग्वेन मुद्रा हालको समयको लागि अवमूल्यन गरिएको छ, हामी अन्तमा शीर्षक प्रश्नको उत्तर दिनेछौं।
हो, एक्सचेन्जको कारण, यो सिउदाड डेल एस्टेमा खरीदको लायक छ। वैसे पनि, म यहाँ भन्छु कि शहरमा विश्वका विभिन्न शपिंग सेन्टरका धेरै शाखाहरू छन् र प्रसिद्ध शहरीहरूका नामका साथ केही किनमेल केन्द्रहरूको नाम राख्ने चलन छ। यसैले, तपाईंले शपिंग डेल एस्टे भेट्टाउनुहुनेछ, जुन मित्रताको पुलको सब भन्दा नजिक छ जुन ब्राजिल सीमाना हो। त्यहाँ शपिंग म्याड्रिड, शपिंग मोनालिसा र अन्य अरू पनि छन्।
शपिंग डेल एस्टे मात्र मूल्य मूल्यको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्
शहरमा थप तपाई किनमेल डेल एस्टे भन्दा सस्तो मुल्यहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ
सियुदाद डेल एस्टेसँग प्राय: रूपान्तरण तालिका हुन्छ र यसले डलर, रियल, अर्जेन्टिना पेसो र गुवानीलाई स्वीकार्छ, जुन पराग्वे मुद्रा हो। यो सामान्यतया मुद्राहरू बीच एक स्वीकार्य विनिमय दर हो।
सँधै आफ्नो सामानहरूको ख्याल राख्नुहोस्, यस क्षेत्रमा धेरै सडक विक्रेताहरू र पिकपकेटहरू छन्।
यदि तपाईं फर्कने मैत्री पुल पार गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, यो १:16:०० भन्दा पहिले गर्नुहोस्। यस समयमा पसलहरू बन्द हुन थाल्छन् र ट्राफिक ज्यादै जाम भएको छ
स्टोरको भित्र र खरीद पूरा गर्नु अघि सधैं इलेक्ट्रोनिक्स परीक्षण गर्नुहोस्। यो फिर्ती स्वीकार गर्न स्थानीय चलन छैन। र त्यहाँ धेरै प्रतिलिपिहरू "विकल्पहरू" को रूपमा बेचिन्छ जुन काम नगर्न सक्छ। सावधान हुनुहोस् यदि मूल्य मूल्य सन्दर्भ भन्दा धेरै छ। (पहिलो टिप)
ठिक छ, म भन्न सक्दछु कि जब म त्यहाँ थिएँ मैले इलेक्ट्रोनिक्सको ठूलो खरीद गरें। मैले वाटरप्रूफ क्यामेरा खरीद गरें जुन फोज डो इगुआउको झरनामा डुब्यो र यसलाई राम्ररी बेचेर बेच्यो। मैले सेलफोन पनि किनेको थिए जुन त्यतिखेर राम्रो र सस्तो थियो। दुर्भाग्यवश मैले उनलाई लिस्बनमा हराएँ (तथ्यले मलाई त्यहाँको विमानस्थल जस्तो मनपर्दैन)।
यदि तपाईं केवल किनमेल गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए सिउदाड डेल एस्टेमा रहन्छ। तर यदि तपाइँ पर्यटन को लागी जानु भयो भने सुझाव Foz do Iguaçu (ब्राजील) मा नै रहनु हो। यही कुरा मैले पहिलो यात्रामा गरेँ, म फोज डो इगुअसुको होस्टलमा बसेँ। यसले विश्वभरका मानिसहरूसँग हेर्न र मित्रताको सुविधा पुर्‍यायो। मैले अस्ट्रिया, जर्मन, अर्जेन्टिना, पराग्वेयनलाई भेटें र मद्दत गरे। धेरै राम्रो थियो! खैर, पराग्वे दुई आधिकारिक भाषाहरू छन्। गुरानी र कास्टिलियन। सडकमा हाम्रो कुराकानी महान थियो! जब हामी जोडीमा थियौं, जर्मन, क्यास्टिलियन (स्पेनिश), पोर्तुगाली प्रबल। जब सबैसँग कुरा गर्ने हो यो अंग्रेजी थियो, क्यास्टिलियनमा अनुवाद गरिएको थियो, किनकि हाम्रो गाइडले अ our्ग्रेजी बोल्दैन।
हामीसँग यो समूहको आधिकारिक फोटो पनि छ जुन गठन गरियो।
र अरू के जानुहुन्छ?
सिउदाद डेल एस्टेको थपमा, तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ:
- चरा पार्क,
- फोज डो इगुआउ (ब्राजील)
- पोर्टो इगुआजा (अर्जेन्टिना)
र अब जब तपाइँ प्याराग्वे को इतिहास र केहि शपिंग सल्लाह को बारे मा एक सानो थाहा छ, म यहाँ रोकिन्छ! एक ठूलो अंगालो र अर्को समय सम्म। (त्यहाँ रातो बटनका लागि साइन अप गर्नुहोस्।) 😎
कसरी सिउडेड डेल एस्टे खरीदारी कार्ट कसरी पराग्वे